Ijele le-Count of Monte Cristo liseMarseille | Izindaba Zokuhamba
UMaria Jose Roldan | | EFrance, General
Mhlawumbe lapho uhamba ngamaholide akho uthanda ukuya ezindaweni ezifana ne- ijele le-Count of Monte Cristo, engajwayelekile, engenasibindi ... kulezo zindawo othanda ukuzazi ngenxa yomlando wazo wonke. Uma uvakashela izindawo ezinomlando omuhle futhi ungaphakathi kwamathempeli, izinqaba noma amadolobha awonakele, unomuzwa wangaphakathi wokuthi ukube ubunjani ngesikhathi lapho bekubaluleke kangaka. Kuyindlela yokubuyela emuva esikhathini esedlule nokwazi umlando wezindawo.
Namuhla ngifuna ukukhuluma nawe kabanzi mayelana nejele laseCount of Montecristo, indawo lapho izinkulungwane zabantu zihamba amakhilomitha namakhilomitha ngenhloso eyodwa yokuyazi nokukwazi thola okuningi ngomlando wayo. Ngaphezu kwalokho, kuyindawo esendaweni ebabazekayo engeke ikushiye ungenandaba nganoma iyiphi indlela.
1 Isigodlo se-If
2 Ijele laseMontecristo
3 Ama-anecdotes athakazelisayo
4 Ungafika kanjani ejele le-Count of Montecristo
5 Uhambo oluhle eMarseille
ICastle of If yakhelwe esiqhingini esincane kunazo zonke seziqhingi zaseFriuli eziseMarseille. Kuyisivikelo esakhiwe ngaphansi kuka-1529 ngomyalo kaFrancisco I waseFrance ngenhloso yokuvikela idolobha kubahlaseli abangaba khona ukugwema izinhlekelele kubantu bakhona.
Ngokushesha ngemuva kokwakhiwa kwalo, layeka ukusebenza njengenqaba yokuvikela abantu futhi laqala ukusebenza njengejele, umsebenzi ozoqhubeka cishe amakhulu amathathu eminyaka, njengoba laqhubeka kwaze kwaba ngu-3. Abantu abaningi abadumile baboshwa ezincwadi nezamabhayisikobho ezibabeka phakathi kwalezi zimfanelo. Kepha noMarquis de Sade, owayeboshwe kwelinye ijele laseMarseille, noma indoda eyayigqoke imaskhi yensimbi ayitholakalanga amathambo abo lapha, okungukuthi, noma ngabe izincwadi nezamabhayisikobho zingakanani ezibeka phakathi kwalezi zindonga, awatholanga amathambo abo. Izinsalela zokufa.
U-Alexander Dumas naye wamenza wangaziwa futhi wamenza waduma kakhulu ngokubopha umlingiswa wakhe owaziwa kakhulu kwinoveli ye-adventure lapha. "Ukubalwa kweMonte Cristo." Kule noveli, umlingisi uyakwazi ukweqa esiqhingini kodwa akukho ukuphunyuka okwake kwabikwa.
Ngo-1890 yavulelwa umphakathi njengendawo yokuheha izivakashi futhi namuhla, kunabantu abangaba ngu-90.000 ngonyaka abahamba amakhilomitha amaningi ukufinyelela eMarseille futhi bakwazi ukuhamba emaphasishi alo athokozisayo.
Kukhona i-anecdote enelukuluku eyenzekile esiqhingini esincane ngaphambi kokuqala kokubekwa kwezisekelo zokuqala zensimbi. Umkhumbi wasePutukezi ongithwala ngobhejane (okwakuyisipho esivela kuManuel I wasePortugal uPapa Leo X) wenza ukuma kulesi siqhingi esincane.
UFrancisco ngizifikele mathupha ngenxenye enkulu yenkantolo yakhe ukuzocubungula lesi silwane, ngoba babengakaze babone isifanekiso esiseduze kakhulu futhi emazweni abo kwakungejwayelekile ukuthola lolu hlobo lwesilwane.
Uma ukwazi, unganqikazi ukuvakashela phezulu kwemibhoshongo. Maphakathi nelinye lazo kunesikhalo esiqhaqhazelayo nokuthi izingane ziyazithanda. Abahlubuki, izigelekeqe nezigebengu baboshwa lapha ngezikhathi ezahlukahlukene, kepha kwaba njalo kusukela ngekhulu leshumi nesikhombisa ngesikhathi sezimpi zokuqala zenkolo ukuthi inani elikhulu lamaProthestani laphonswa emgodini lapho iningi labo lafa khona noma lashiywa ukuthi life. Ijele lavalwa ekupheleni kwekhulu le-XNUMX.
Ungafika kanjani ejele le-Count of Montecristo
Kusukela eMarseille ethekwini elidala, ungabamba isikebhe sezivakashi kulesi siqhingi, futhi ungasithola ngasogwini nje. Isuka eQuai de Belges (isiteji sabaseBelgium). Imvamisa iba nokusuka njalo ngehora kusuka ngehora lesishiyagalolunye ekuseni kuphele ngo-XNUMX ntambama, yize isikebhe sokugcina esibuya kuba ngeleshumi kuya kwelesikhombisa ntambama. Eziqhingini ungathola ama-cove amahle wokujabulela usuku oluhle olwandle.
Akusilo uhambo olude oluya lapho uya khona. Lesi siqhingi sincane kunazo zonke futhi izingane ziyathanda ukubona inqaba enamadwala ebukeka njengenqaba enkulu endaweni encane kangako. Uhlobo lwenqaba luzobe luseceleni kwakho uma ufuna ukujabulela usuku oluhle olwandle.
Uma ulapho ungavakashela ijele, umnyuziyamu nezinye izingxenye zesiqhingi. Uma ulamba noma womile, kunebha encane esiqhingini. Lapho ufika, khumbula ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi ubhale phansi izikhathi zokubingelela ukuze ungahlali lapho ungakwazanga ukubuya. Cela ishejuli uma kungenzeka kube khona ukuguqulwa okuthile.
Imibono yedolobha laseMarseille lesiqhingi nayo iyamangalisa, ngakho-ke unganqikazi ukuthatha ikhamera yakho futhi ujabulele leyo mibono emangalisayo. Udinga ukuthi uqaphele kakhulu, ikakhulukazi uma uhamba nezingane, ikakhulukazi lapho uhamba uzungeze lesi siqhingi, ngoba kunezindawo zokwakha izidleke ezinkulu futhi zingaba nolaka kakhulu lapho zivikela izidleke zazo. Ama-seagulls angacabanga ukuthi niyabahlaseli noma ukuthi nifuna ukulimaza amaqanda abo noma amancane futhi bangahlasela ngolaka.
Uhambo oluhle eMarseille
Uma ufuna ukwazi le nqaba enhle, inqaba futhi okwakuyijele futhi, unganqikazi ukulungiselela uhambo lwakho oluya eMarseille ukuchitha iholide elimangalisayo. Ukuvakashela le nqaba kuzoba usuku olulodwa kuphela futhi kuzokwanela ukubona yonke into, kodwa Ungavakashela iMarseille bese uthola ukuthi yini ekukunikeza ngezinsuku zakho zokuphumula.
Uma ungazi ukuthi wenzeni edolobheni elihle kangaka, unganqikazi ukungena ekhasini lakhe lewebhu bese uthola ukuthi yini abanayo ngawe. Uzokwazi ukubona zonke izakhiwo zayo ezibalulekile, izindawo ezakhelene nazo ezinhle, uthole i-gastronomy yayo, uhlangane nabantu bakhona, ujabulele isimo sezulu nayo yonke imisebenzi enayo yezivakashi.
Kusobala ukuthi uma uthatha isinqumo sokuya ejele le-Count of Montecristo, ungajabulela futhi iholide elihle edolobheni laseMarseille. Uyazi vele ukuthi uzoya nini?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » EFrance » Ijele le-Count of Monte Cristo liseMarseille
Umhlahlandlela wami oya eTokyo, okungafanele ungaphuthelwa
Izinhlelo zokusebenza ezi-5 ezihamba phambili zokuhlela ukuphunyuka kwakho